Home / Why is Education important?
“Education isasocial process. Education is growth. Education is notapreparation for life; education is life itself” လို့ John Dewey ဆိုခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ။
ပညာရေးကဏ္ဍဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုမှာ အရေးပါဆုံးအရာအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ Social Process တစ်ခုပါ။ ဘဝအတွက် တဆင့်ထက် တဆင့်ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှု တစ်ခု လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက် ပညာရေးဟာ ဘဝအတွက် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားရမယ့် အရာဆိုတာထက် ပညာရေးဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကိုက ဘဝရဲ့ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ပညာရေးဆိုတာ ကျောင်းတစ်ကျောင်းက အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိထားတာမျိုးကိုသာ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်သင်ယူထားတဲ့ ဗဟုသုတ အသိပညာတွေနဲ့အတူ အမှန်အမှား ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းရှိတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
ဘာကြောင့် ပညာရေးက ကျွန်တော်တို့ ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ရပ်တည်နေတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ အကယ်၍များ ကျွန်တော်တို့က ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေး တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ရင်
အိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်။
ဘဝမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ? အောင်မြင်ချင်တာလား? လူတိုင်းရဲ့ လေးစားမှုကို ခံလိုတာလား? ချမ်းသာ ကြွယ်ဝတဲ့ လူဖြစ်ချင်တာလား? စတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံး အခြေခံအချက်က သင့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေး ရှိနေဖို့ပါ။ ဥပမာ ကိုယ်က အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို နှံ့စပ်စွာ လေ့လားထားရမယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သူဆိုရင်လည်း ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်တာတွေပေါ့။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်ကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ်လျှောက်လှမ်းမယ့် လမ်းကို အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေကို အခြေခံကစတင်ပြီး ပိုင်နိုင်စွာ လေ့လာထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ပညာတတ်ရုံနဲ့ Living Standard ကြီး မြင့်သွားရောလားလို့ မေးရင်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။ ကိုယ်က ဘယ်လို ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကိုလိုချင်တာလဲ၊ ဒီလို အခြေအနေရောက်အောင် ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမယ့် နေရာမှာ ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပညာရေးက အများကြီး အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ်နေချင်တဲ့ Lifestyle ပုံစံကို တဖက်တလမ်းက ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်။ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Living Standard ထိ ရောက်ရှိလာအောင် ကြိုးစားရမှလည်း အထောက်အပံ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး အရာလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ကိုယ့် ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဆိုလိုချင်တာက ငွေကြေး အခြေအနေတစ်ခုတည်းကိုပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အခြေအနေမျိုးမဆို Self-Dependent ဖြစ်တဲ့သူမျိုးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်လာတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားတွေးခေါ် ချင့်ချိန်မယ်။ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်။ ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်ဖောက်နိုင်မယ်။ ဒါက ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတိုင်းရဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲက တချို့ပါပဲ။
လိုက်လျော ညီထွေစွာ ပြုမူဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်။
“No man is an island” ဆိုသလိုပဲ။ လူဆိုတာ Society ထဲမှာရှင်သန် ကျင်လည်ရသူပါ။ ဆိုတော့ ကိုယ်ရှင်သန်နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လို ပြုမူပြောဆို ရှင်သန်နေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ Dos & Don’ts တွေ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ Moral Standard တွေအားလုံးကို လိုက်နာပြီး လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဝန်းကျင်မှာ ဝင်ဆံ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ထဲက ကျောင်းတွေမှာ “စာရိတ္တနဲ့ ပြည်သူ့နီတိ” ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားလာခဲ့ရတာပါ။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ ရှိစေပါတယ်။
“ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့်” ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ ဆိုရိုးလိုပါပဲ။ ပညာဗဟုသုတနဲ့ ပြည့်စုံသူတစ်ယောက် ဘယ်နေရာ ဘယ်အခြေအနေမှာမဆို ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအမြင်ကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ဝေဖန် ဆွေးနွေးပြနိုင်တယ်။ ထောက်ပြနိုင်တယ်။ ဘာမဆို ယုံကြည်မှုရှိရှိလုပ်ကိုင်ရဲတယ်။ Self-Confidence ဆိုတာမျိုးက အလွယ်တကူ မွေးမြူလို့ရတဲ့ အရာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် Educated တစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒီလို Self-confidence က သူ့အလိုအလျောက်ရရှိ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဆုလာဘ် တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာဆိုလိုချင်တာက ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပဲ ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ Value ရှိတဲ့ Lifestyle တစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ ကိုယ်ရဲ့ ပညာရေး Background ဆိုတာက စဉ်းစားချင့်ချိန်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေကို ပိုမို ရင့်သန်လာအောင် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဆေးဝါးတစ်လက်ပါ။ ဘယ်အရာမှာမှ Perfect မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း အမှားအနည်းဆုံးနဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး ဘ၀ တစ်ခုဖြစ်လာအောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် Educated Person တွေ အတွက် Life Security ဘဝအာမခံချက် ကောင်းမွန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍရဲ့ အရေးပါရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အသေးစိတ် တွေးတောရင် တွေးတောသလိုကို အကြောင်းအရင်း အချက်အလက်တွေ များစွာ ရှိနေဦးမှာပါ။
“No one can truly succeed in life without proper education” ဆိုသလိုပဲ။ ဘဝအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရယူပြီး အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်များစွာကို ဆွတ်ခူး ရယူနိုင်ကြပါစေ။